Iwo mashanu Akafa Zvikanganiso zveChigadzirwa Management | Martech Zone
Svondo, October 22, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndanga ndichishanda siku nesikati kwemavhiki mashoma apfuura. Zvave zvichitambudza, kunyanya sezvo ndine akati wandei mapurojekiti mapurojekiti andaive ndazvipira kushanda pairi. Ini ndaneta… husiku humwe vhiki rino ndakasvika kumba ndikanorara ndikazomuka kwapera maawa gumi nemaviri. Ndine chokwadi chekuti ndakabata dzihwa uye muviri wangu wakazviramba nekuti ndakanga ndisina nguva yekuhotsira. Nyaya dzebasa hadzina kuomarara zvachose, hatina kungoteerera vatengi vedu.
Zvinonzwika semhinduro yakapusa, asi sei vanhu vachiregeredza nguva dzese? Ini ndinofunga kune zvikonzero zvinoverengeka:
Iwe hauteerere kune vanhu vazhinji, iwe unoteerera kune mazwi makuru. Izvi zvinogona kukanganisa kutora kwako kutora shanduko yakakura-yekupararira isingakoshe kana kukumbirwa neruzhinji. Njodzi pano ndeyekuti iwe unoti, "Ndateerera mutengi". Dambudziko nderekuti iwe hauna kuteerera mutengiS.
Iwe unotenda, mune zvese chokwadi, kuti urikuita chirongwa chakanakira mutengi. Chinangwa chako chakanaka. Moyo wako wanga uri panzvimbo chaiyo. Dambudziko nderekuti hauna kutanga watarisa navo. Chokwadi ndechekuti iwe uchadaro haana nyatsonzwisisa zvinoitwa nevatengi nechigadzirwa chako - kunyanya sezvo base yako ichikura zvakanyanya muhukuru.
Iwe unofunga iwe unoziva zvirinani. Neimwe chikonzero, iwe wakagamuchira chinzvimbo chako chechiremera sekubvuma kwehunyanzvi hwako mune yakapihwa munda. Saka iwe unofunga iwe unoziva izvo zvinodiwa nemutengi uye zvaanoda.
Iwe hautarise padambudziko, iwe tarisa pane vamwe mhinduro pasina kutsanangura zvizere kuti dambudziko raive rei. Kana, iwe unorasikirwa saiti yedambudziko iwe uchiramba uchiwedzera mhinduro.
Iwe haurwire vatengi vako. Iwe unobvumidza mhinduro kuti dzivakwe uye dzibatanidzwe zvichibva muboka revatambi vane hunyanzvi vane hunyanzvi. Ivo vanofambisa kutonga kwako ... Dambudziko nderekuti zvine musoro mukati, asi kwete kumutengi.
Zvekare zvakare, izvi zvinoita kunge zvikanganiso zviri nyore kudzivisa. Nekudaro, muzuva nezuva hustle yekambani ine vashandi vakakura uye mhinduro dzakanaka, zviri nyore kwazvo kurasikirwa saiti yemutengi. Kana ukadaro, kurwadziwa kwacho kuchakurumidza uye kusagadzikana zvikuru.
Rova uye Mhanya Mugovera!
Gumiguru 22, 2006 na2: 05 PM
Yakanaka post Doug - iwe wakapfupisa izvi zvakanyatsonaka.
# 1 chimwe chinhu chagara chakandiomera kurwisa. Kunyanya nemapurogiramu angu akaita seFormSpring uye Ponyfish, kwandinenge ndine vatengi vazhinji vakasiyana vanonyarara vachida mashandiro anoita chinhu, asi mushandisi ane ruzha kwazvo anondikurudzira kuti ndichinje.
Ehezve, ini ndinoonawo izvi kazhinji pamapurogiramu etsika ekuvandudza apo maneja izwi rinodakadza uyo anoda kuti X ave Y, asi vashandisi "chaivo" vanoshandira maneja vanoshuvira kuchema mukusawirirana.